Olee otú iji tọghata VLC ka MP3
VLC ọkpụkpọ abụghị video ọkpụkpọ ma pụrụ ime otú ọtụtụ ndị ọzọ ihe. Ọ bụrụ na ị a na-eji VLC ka dị nnọọ kpọọ vidiyo, mara na i nwere ike ime a dum ọtụtụ ndị ọzọ. N'ihi na otu onye, ​​ị nwekwara ike iji ya dị ka a Ntụgharị. Ọ bụrụ na ị na-achọ iji tọghata VLC akwado faịlụ ka mp3, ị pụrụ ime ya na ala iji na-esonụ ndu.
Nkebi nke 1: On Windows
Part 2: N'ihi na Mac
Part 3: Iji Wondershare Video Converter Ultimate
Tupu na-aga site nzọụkwụ ndị a, jide n'aka na windows version VLC-akwado ndị na faịlụ na ị chọrọ iji tọghata.
Nzọụkwụ 1. Launch VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na pịa tọghatara / ịzọpụta.
Step2. Ugbu a pịa Add button ka ịgbakwunye faịlụ na ị chọrọ iji tọghata n'ime mp3. Ugbu a gaa tọghata / Save.
Step3. Ị ga-enwe ịbanye faịlụ aha na ebe nke mmepụta faịlụ. Otú ọ dị, jide n'aka na na isi iyi faịlụ aha bụ otu ihe ahụ ị chọrọ iji tọghata. N'okpuru ntọala họrọ profaịlụ nke mmepụta faịlụ. Otú ọ dị, profaịlụ ga-mp3, otú Gaa edit profaịlụ.
Step4. N'okpuru encapsulation họrọ WAV na ugbu a gaa Audio codec taabụ. Na-codec MP3. Họrọ ihe kwesịrị ekwesị bitrate na pịa Chekwa. Ugbu a gaa na-amalite, na-amalite ntughari nke faịlụ.
Step5. The Ọganihu a ga-emere gị soro. Oge na-adabere na size nke faịlụ.
YYou nwere ike iji VLC na gị Mac dị ka mma. Lelee Mac version bụ ruo ụbọchị ma na-akwado usoro ị chọrọ iji tọghata.
Nzọụkwụ 1. Họrọ faịlụ ị chọrọ igwu. Right pịa ya na ẹkedori faịlụ na VLC na gị Mac. Gaa Njikwa Tab, na pịa N'ọgba / Stream.
Nzọụkwụ 2. Ugbu a gaa tọghata / Save.
Nzọụkwụ 3. Na-esote ihuenyo, ị ga-mkpa itinye aha na ebe nke mmepụta faịlụ. Jide n'aka na ndọtị nke faịlụ bụ MP3. Jiri Chọgharịa bọtịnụ maka ị na-ahọrọ na mmepụta ebe. N'okpuru mwube aga dezie profaịlụ ma ọ bụrụ na MP3 bụ profaịlụ na-adịghị họrọ ndabara.
Nzọụkwụ 4. mbụ n'okpuru Họrọ Profaịlụ taabụ họrọ WAV na n'okpuru Audio codec họrọ MP3 megide Codec.
Nzọụkwụ 5. Jide n'aka na ị hazie ya maka nri bitrate. Iku ndị bit ọnụego, elu ga-size nke mmepụta faịlụ. Na-ọzọ ntọala dị ka ọ bụ. Ugbu a, pịa Mee na-aga azụ.
Nzọụkwụ 6 - Họrọ a ebe site n'inyocha Save dị ka File na ị ọma na-aga.
Nzọụkwụ 7. Ị nwere ike ịlele ọnọdụ nke akakabarede na isi interface. Ozugbo dechara i nwere ike ịhụ ihe ndị ha chọrọ faịlụ na họọrọ mmepụta faịlụ na-aga.
Nkebi nke 3: Iji Wondershare Video Converter Ultimate
Ọ bụrụ na ị na-achọ mfe ụzọ si iji tọghata gị faịlụ na videos, anya maka a pụrụ ịdabere na software dị ka Wondershare Video Converter Ultimate.
Ihe kacha mkpa ma ikpe bụ na VLC version na gị usoro ga na-akwado faịlụ format ị chọrọ iji tọghata n'ime MP3. Otú ọ dị, ọ bụrụ na faịlụ a bụ nke na-emegide usoro ị nwere ike iji Wondershare Video convertor Ultimate, nke bụ ike Ntụgharị na-atọghata faịlụ ugboro 30 ngwa ngwa karịa VLC.
> Resource> MP3> Olee otú iji tọghata VLC ka MP3?